२६ असार २०७६, बिहीबार १२:४९
काठमाडौं । मानिसको सुन्दरतामा दाँतको योगदान धेरै हुन्छ । हाँस्दा वा बोल्दा दाँत सेतो र मिलेको देखिएमा त्यो व्यक्तिलाई जसले पनि मन पराउँछ । तर, अधिकांश मानिस दाँतको हेरचाहमा ध्यान दिँदैनन् । मानिसहरु समस्या बढ्दै गएपछि मात्र दाँत देखाउन अस्पताल वा चिकित्सककहाँ पुग्ने गरेका छन् । दुखाई अत्यधिक हुने, दाँतमा किरा लाग्ने, दाँत बिग्रने, दाँत मिलाउनुपर्ने जस्ता समस्या लिएर बिरामी आउने गरेको दन्त चिकित्सक डा.विकास देसारको भनाइ छ ।
‘बच्चालाई दूध खुवाउने बेलादेखि नै यदि दाँत सफा गरी रहने हो भने पनि समस्या कम हुन्छ । तर मानिसमा यस्तो बानी नहुने भएकाले नै बच्चामा यस्ता समस्या आउने गरेका छन् । यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, ’क्यानडा नेपालसँगको कुराकानीमा डा. देसारले भने । बच्चालाई चकलेट वा खाने कुरा खान दिएपछि मुख कुल्ला गर्ने हो भने ८०/९० प्रतिशत रोग आफै कम हुने उनी बताउँछन् । त्यसैले केही खानेवित्तिकै बच्चालाई कुल्ला गर्ने बानी बसाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
हेर्नुहोस भिडीयो कुराकानी:
‘बच्चाको दाँत पटक पटक किराले खायो, पिप जम्यो र जरासम्म पुगेर हड्डीमा पिप जमेमा खतरा हुन्छ । धेरै ढिलाइ भएमा क्यान्सर जस्तो रोग लाग्छ । त्यसैले बेलैमा डाक्टरसँग उचित सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ,’ उनले भने । ६/६ महिनामा दाँतको चेकजाँच गरेमा दाँतबाट हुने विभिन्न रोगहरुको समाधान हुने उनले बताए । दाँतमा ब्रस गर्दा तलमाथिको गिजा छुने गरी ५–७ मिनेट लगाएर ब्रस गर्नुपर्छ । यसले पनि दाँत फोहोर र कीरा लाग्नबाट बचाउने देसारको भनाइ छ ।
जान्नुहोस् गाईको दूध खानु फाइदा कि भैंसीको ?
डाक्टर पढ्न ६ वर्षको अवधिमा पाँच हजार नेपाली विदेशिए
ढाड दुख्ने समस्या छ ? हेर्नुहोस् यस्ता छन् अचूक औषधि कपुरका फाइदै फाइदा